Dowlada Fransiiska ayaa tarxiishay qoys reer Bosnia ah oo u diiday gabadhooda inay guursato nin… – Hagaag.com
Posted on 24 Oktoobar 2020 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Dowlada Fransiiska ayaa tarxiishay qoys reer Bosnia ah kuwaasi oo garacay isla markaana timaha ka xiiray gabadhooda qaan gaarka ah oo rabtay inay guursato nin Serbian ah, sidaasi waxaa sheegay wasaarada arrimaha gudaha ee Fransiiska.
Wasaarada ayaa sheegtay in shan ka mid ah qoyska gabadha loo tarxiilay magaalada Sarajevo, caasimada Bosnia iyo Herzegovina maanta oo Sabti ah aroornimadii.
“Tarxiilkan ayaa sabab u ahaa dhaqan aan la aqbaleynin oo qeyb ka mid ah qoyska kula kaceen bishii August gabadhooda qaan gaarka ah inta ay garaaceen ayey timaha ka xiireen, taasi oo jeceyl u qaaday wiil reer Serbia ah oo diin kale heysta”. Wasaarada ayaa sidaasi ku dartay.
Waxay ku dartay gabadha oo nidaamka reer galbeedka weli yar ayaa waxaa daryeeli doona qolooyinka caruurta qaata, waxayna heli doontaa xaqeeda degenaanshaha France markey gaarto da’da weynida.
Warbaahinta Faransiiska ayaa soo werisey bishii August in gabadh 17 jir ah oo Bosnia Muslim ah oo deggen magaalada Besancon ay garaaceen qoyskeeda isla markaana xoog uga xiiray timaha iyadoo sababtu aheyd inay rabtay inay guursato wiil 20 jir Serbian Christian ah.
Ciidamada Bosnia iyo Serbia ayaa dagaalamay sanadkii 1990 kaasi oo sababay in lagu laayo dad badan oo aan waxba galabsan oo reer Bosnia ahaa.